मैले कोरोना जितें | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
चैतमा लकडाउन भएपछि सुरुवाती समयमा म काठमाडौंमा थुनिएको थिएँ । पार्टीका कामहरूमा व्यस्त भएँ । सुर्खेतमा संसद्को अधिवेशन पनि सुरु भएको थिएन । संसदको अधिवशेन सुरु भएपछि वैशाख दोस्रो साता म सुर्खेत आएको हो ।
मलाई व्यक्तिगत रूपमा लकडाउनको अनुभव भएन किनभने सदन चलेपछि मान्छेहरूसँग भेटघाट लगायतका अन्य कामहरूले गर्दा बढ्तै व्यस्त हुनुपर्‍यो ।
सुर्खेतमा हुम्लाका मानिसहरू पनि भेटिने भएकाले उनीहरूको सहयोगमा पनि खटिनुपर्यो । विभिन्न खालका मानिसहरूलाई भेटेर उनीहरूका कुरा सुन्ने अनि यता उता गर्दा फुर्सदै नहुने । लकडाउनको बेलामा अझै व्यस्त भएको थिएँ । कहिलेकाहीँ त फोन पनि स्वीच अफ गरौँ कि भनेजस्तो भएको थियो तर जनताको प्रतिनिधि भएपछि त्यस्तो गर्न पनि भएन । कोही गड्डा चौकीमा छु भन्छन् । अनि कोही बीच बाटामा अलपत्र परें भन्छन् । कोही काठमाडौंबाट आएको गाडी बाटोमा रोक्यो भन्दिन पर्यो भन्छन् । त्यसैले निकै तनावका माझ व्यस्त भइयो ।
त्यो बेला बसभाडा नभएकालाई पैसा सहयोग गर्ने, बाटामा अलपत्र परेकाहरूलाई खाना खुवाउने काम गरियो । दुई दिनसम्म ४ सय मानिसलाई खाना खुवाइयो होला । तर मैले आफूले यसो गरे भनेर त्यति बेला सार्वजनिक गरिन । किनकि म धर्ममा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ । एउटा हातले दिएको अर्को हातले थाहा पाउनु हुँदैन भनेर धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ । त्यही भएर मैले प्रचार-प्रसार गरिन । अहिले तपाईंले यी सबै कुरा खोतलेकोले मात्रै मैले भनेको हुँ । आफ्नो खुबी अनुसार सहयोग गरेको कुरा मलाई भन्न मन लाग्दैन । त्यो मेरो कर्तव्य नै हो भन्ने लाग्छ । म काठमाडौंमा रहँदा पनि सकेको सहयोग गरेको थिएँ । त्यही बेला गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर गाउँ पठाउने काम पनि गरें ।
मैले कोरोना भाइरसको संक्रमणका बेलामा विपक्षी दलको नेताले पाएको गाडी पनि लिन्न भनेको थिएँ । किनकि त्यो गाडी चिकित्सक लगायत अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न मैले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई भनेको थिएँ । आवश्यक परेछ भने कोरोनाको सन्त्रास घटेपछि लिउँला भनेर समेत मैले प्रदेश सरकारलाई भनेँ ।
यो बेला मैले समाजका विभिन्न खालका मान्छेहरू देखें । कोही आफूलाई दुःख परे पनि सकेसम्म अरूको खान हुँदैन भन्ने । एक खालका मानिसहरू यही बेलामा जम्मा पार्नुपर्छ भन्ने सोचले कहिले एक ठाउँमा जाने अनि कहिले अर्को ठाउँमा जाने । अनि विभिन्न समस्या देखाएर मागिरहने खालका हुने रहेछन् । एक खालका मान्छे भने साँच्चै पीडित पनि भेटिएका थिए । उनीहरू साँच्चै मर्कामा परेका थिए ।
सरकारी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रका मानिसहरूले पनि यो समयलाई कमाउने अवसरका रूपमा लिए । यो बेलामा व्यापार गर्नुपर्छ भनेर भीटीएम, मास्कको खरिदका नाममा पैसा कमाउनेहरू पनि भेटिए । पीसीआर मेसिनको अभाव छ तर गाउँगाउँबाट स्वाब संकलन गर्ने गरेको देखियो । यसको पछाडि भीटीएमको व्यापार पनि देखियो ।
कतिपय युवाहरू चाहे ती कांग्रेसका हुन् या कम्युनिष्टका तर प्रवृत्ति भने उस्तै देखियो । सुर्खेतमा पनि कोही युवासंघ र तरुण दलका भनेका छन् । सामान जम्मा गर्ने बेलामा चन्दा अनि आवश्यक परेमा धम्क्याएका पनि छन् । तर त्यसलाई वितरण गर्ने बेलामा प्रचार-प्रसार गराएर ठूलै काम गरेको भन्ने पारेको पनि देख्न पाइयो।
यो बेलामा अर्बमा खेल्ने व्यापारी पनि १० हजारको लोभमा जेलमा पुगे । गाउँपालिका, नगरपालिकाले राहत बाँड्यौं भन्ने नाममा धेरै खर्च गर्ने गलत प्रवृत्ति पनि बढ्यो । प्रहरीको लापरबाहीले कोरोना संक्रमितहरू एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा पुगे । माओवादी द्वन्द्वको बेलामा सुरक्षा निकायकै सहयोगमा हतियार आएजस्तै भयो अहिले पनि । प्रहरीलाई पैसा बुझाएपछि बोर्डरबाट आउन सक्ने जान सक्ने भएकोले मानिसहरूको आवतजावतमा पनि भीड भयो । यी विकृतिका पाटा हुन् तर यो बेला सुरक्षाकर्मीहरूले दिनरात खटेर काम गरेको कुरा पनि भल्नु हुँदैन ।
समयमै लकडाउन गरेकाले नेपालमा जुन किसिमको भयावह अवस्था हुन्थ्यो त्यो हुन पाएन भन्ने लाग्छ । हामीले पनि धेरै पटक सरकार चलाएका छौं भोलि पनि चलाउँछौं । त्यसैले राम्रोलाई राम्रो र नराम्रालाई नराम्रो भन्न सक्नुपर्छ । लकडाउन गर्नु सरकारको सही कदम थियो । यद्यपि राज्यले यस्ता बेलामा गर्न सक्ने कतिपय काम भने गर्न सकेन । कतिपय जनता भोकभोकै परे तर त्यसमा सरकारको ध्यान जान सकेन । लकडाउन गरेर सरकार पनि लक्ड भएर बस्नु चाहिं हुन्नथ्यो भन्ने लाग्छ मलाई ।
म आफैलाई पनि कोरोना संक्रमण भएकाले मसँग कोरोनाको भिन्न अनुभव पनि छ ।
म भौतिक दूरी कायम गर्ने, साबुन पानीले हात धुने र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने मामिलामा अलि सचेत थिएँ तर मलाई नै कोरोना संक्रमण भयो । मलाई साथीहरूले पनि तपाईं त सबैभन्दा सजग मान्छे कसरी यस्तो भयो भनेर समेत भने । यसको उपचार त पत्ता लागिसकेको छैन । नेपालको सन्दर्भमा डरलाग्दो छ पनि र छैन पनि जस्तो भएको छ ।
मलाई कुनै लक्षण देखिएको पनि होइन । काठमाडौं जानु छ एक पटक पीसीआर गरेर जाऊ भन्दाखेरि त्यो देखिएको हो । त्यो लागिसकेपछि मैले साथीहरूलाई भन्न नपाउँदै केही अनलाइनहरूले समाचार राखिदिएछन् । स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल अनुसार यसरी भन्न मिल्दैनथ्यो । भन्नुपर्दा पनि परिचय नखुल्ने गरी मिलाएर लेखेको भए हुने थियो ।
अनलाइनहरूमा समाचार आएपछि मलाई सबैतिरबाट फोन आउन थाल्यो । अब कोरोना लाग्यो सबै सकियो भन्ने खालको मानसिकताले मलाई ठूलो पीडा भयो । त्यसपछि मैले सोचे, ठीकै छ, जिविस सभापति भएँ, सांसद भएँ कर्णालीबाट पहिलो क्याबिनेट मन्त्री भएँ । अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता छु, जनताको सेवा गर्न पाएको छु । जे हुन्छ, हुन्छ तर हरेस खाँदिन भनेर मन बलियो बनाएँ ।
फेरि यो कोरोना कुनै पूर्व जुनीको पाप पनि होइन । यो एक खालको भाइरस हो । यसलाई व्यायाम गर्ने तातोपानी खाने लगायत गरेर ठीक पार्छु भनेर आत्मबल बनाए ।
मेरो अनुभवले जसरी मान्छेलाई सर्ने र सार्ने गर्छ भनिएको थियो त्यस्तो रहेनछ कि जस्तो पनि लाग्छ । सिन्धुपाल्चोकमा सुत्केरी आमालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखियो, त्यसकै कारणले उनको मृत्यु भएको पनि थाहा पाएको थिएँ । तर उनको नवजात शिशुलाई देखिएन । मेरो पनि त्यस्तै अनुभव रह्यो । मसँगै बस्ने मेरो स्वकीय सचिव अनि खाना पकाउने नानीलाई पनि कोरोना भएन । मलाई कोरोना लागेपछि ६ सयभन्दा बढीलाई ट्रेसिङ गरेको कसैलाई पनि पोजेटिभ देखिएन ।
कोरोनको यसको उपचारमा विशेषगरी खानपान र रहनसहनले पनि फरक पार्दो रहेछ । मैले कोरोना लागेपछि अस्पतालमा बस्न भन्दा घरमै बसेँ । मेरो घरमा मलाई खासै अप्ठ्यारो भएन । उपचार अस्पतालमा भन्दा पनि आफैले ध्यान दिएमा राम्रो हुने रहेछ । तर त्यसका लागि घरमा बस्ने सुविधा राम्रो हुनुपर्यो ।
सुरुवाततिर रक्सी खाएर कोरोना ठीक हुन्छ पनि भनेका थिए । तर त्यस्तो होइन जुन खानाले शरीरलाई कमजोर बनाउँछ त्यस्तो खाना खानु हुँदैन । धूम्रपान गर्ने अनि कमजोर बनाउने खालका खाना खानेलाई यसले बढी हानि गर्ने रहेछ । यो लागेपछि हामी बच्न सकिन्छ तर ख्याल गर्नुपर्छ ।
आइसोलेसनमा अरूबाट छुट्टै बस्दा सुरुमा त मलाई २-३ दिनसम्म खोकी लाग्यो, टाउको दुख्यो अनि पखाला लाग्यो, ओहो कोरोनाको असरले गर्दा हो कि जस्तो लाग्यो । आइसोलेसनमा बसियो भन्ने बित्तिकै सोचाइ नै अर्कै हुने रहेछ । फेरि मैले सुगरको औषधी खाइरहेकोले त्यस्तो कुरा मनमा खेलेको होला झैँ पनि लाग्यो । कोरोना लाग्दा आत्मबल बलियो बनाउने सबैभन्दा जरुरी देखें ।
मैले आइसोलेसनमा बस्दा घाँटी अप्ठ्यारो भएको भनेर दिनमा तीनचोटि बाफ लिने काम गरेँ । तातो पानी, मह राखेर अदुवा, बेसार र टिमुर राखेर खाएँ । शारीरिक व्यायाम गरें । जीउबाट पसिना निकाल्ने काम गरें । सिटामोल के के खाने भन्थे मैले त्यसो गरिन फलफूल खाएँ ।
एक पटक भने सुतेको बेलामा निकै अप्ठ्यारो भयो । अब भेन्टिलेटरमा जानुपर्छ कि जस्तो पनि भयो । बाहिर निस्किए अनि फेरि भित्र आएँ । यो केही होइन मैले यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर आत्मबल बलियो बनाएँ । कस्ता कस्ता लडाइँ जितिन्छ यो केही होइन ठीक हुन्छ भन्ने मनमा राखें र कोरोनालाइ जितें ।
अहिले त मैले कोरोनाबारे मजाकमा “आफन्त बित्दा १३ दिन क्रिया बस्नुपर्ने कोरोना लाग्दा १४ दिन पर्ने रहेछ” भनेर समेत भन्ने गरेको छु । यो कोरोना केही पनि होइन भन्ने भनेर लापरबाही गर्नु हुन्न यसबाट सतर्क हुन जरुरी छ । त्यस्तै कोरोना लाग्यो लौ खतमै भयौं भन्ने पनि सोच्नु हुन्न ।
नेपालमा कोरोना लागेकालाई छि छि र दूरदूर गर्ने नराम्रो बानी छ । कतिले कोरोनापछिको सामाजिक पीडाले झुन्डिएर आत्महत्या गरे । कोरोना लागेकालाई घृणा होइन माया गरौं ।
कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता मा. जीवनबहादुर शाहीसंग गरिएको कुराकानीमा आधरित रहेर यो कथा लेखिएको हो ।
यो बेला केहि गर्ने जोश !
१ भाद्र २०७७, सोमबार २१:४४
विदेशमा विरक्तिएको मन
२२ श्रावण २०७७, बिहीबार ०७:०३
‘चिन्ता मान्न छाडेकी छु’
१३ आश्विन २०७७, मंगलवार १०:०५